Tani waxay u qalantaa boostada blog ... Thanks, Kathy! | Martech Zone
Tani waxay u qalantaa boostada blog Mahadsanid, Kathy!
Saturday, April 7, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
In yar ka hor waxaan bilaabay inaan xiriiriyadayda maalinlaha ah dul dhigo hal qoraal oo mareeg ah. Waxaan sidaas ku sameeyay laba sababood awgood:
Ma aanan haysan wax aan ku daro wadahadalka laakiin waxaan hubaa inaan jeclaa akhristayaashayda inay helaan 'dahabkan' yar ee macluumaadka.
Ma aanan dooneynin inaan dib u cusbooneysiiyo waxa qof walba oo kale horey u qoray. Kuuma sheegi karo sida ay u jahwareersanaayeen oo ay tahay inaan dhex maro 100 quudin akhristaheyga ka hor iPhone, iPhone, iyo post-iPhone. Haddii ay tahay uun dib-u-habayn, tuur xiriiriye kor ah oo lagu dhammaystiro.
Ma aanan maqlin wax cabasho ah oo ku saabsan xiriiriyeyaasha - faallooyinka oo dhami runti way fiicnaayeen. Waxaan rajeynayaa inaad sidaan oo kale u jeceshahay inaan u gudbiyo macluumaadka aan qaadanayo.
Qoraalkani waa ka duwan yahay, in kastoo. Si fudud ugama tilmaami karo qoraal la'aan. Dhammaan baloogyada aan tixraacay boggeyga, Abuuritaanka Isticmaalayaal Xamaasad Leh waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad.
Waa kuwan tusaale fudud oo ah sida uu balooggu u awood badan yahay, Kathy Sierra waxay ku soo koobtay waxaan u dagaallamo oo aan ka shaqeeyo maalin kasta oo aan ka shaqeeyo shaqadayda oo buuxda laba muuqaal oo fudud:
Iyo barnaamijka softiweerka:
Waxaan faallo ka bixiyay baloogyo badan laakiin waan iska ilaaliyay ku xirnaanshaha xaalada xun ee Kathy ay isku aragtay. Kathy waxay bartilmaameed u ahayd qoraalo naxdin iyo cabsi badan leh iyo hanjabaado laga helay bog kale. Ma doonayo inaan erayo ku dhajiyo Kathy afkeeda laakiin markaan ka qiimeeyo qoraaladeeda, waxay iska cadahay inay wax walba badaleen. Waxaan qiyaasi karaa oo keliya waxa ay ahayd sidan in la maro oo fikirradayda iyo ducooyinkayguba waxay la jiraan Kathy.
Kathy waxay ka tagaysaa baloog garaynta sababtoo ah soo-gaadhista tiro badan ee ay keento. Dad badan ayaa Kathy ku riixaya inay ku sii wadato barteeda laakiin uma maleynayo inay taasi cadaalad tahay gabi ahaanba. Kathy si deeqsinimo leh ayey ugu muujisay barteeda, waxay ahayd wax lala yaabo. Waxyaabaha ku jira baloogga ayaa si fudud loogu samayn lahaa daabacaad ama laba ka mid ah Madaxa Koowaad buugaag, laakiin taa badalkeeda fikradahan cajiibka ah waxaa naloo siiyay bilaash.
Mahadsanid, Kathy! Haddii ujeeddadaadu ahayd inaad ka caawiso ama ka beddesho hal qof bartaada, waad ila guuleysatay. Waxaan rajeynayaa hamigaaga xiga! Waxaan jeclaan lahaa inaan arko adiga oo isku soo ururinaya dhammaan macluumaadka ku jira boggaaga buug aad u qurux badan… laga yaabee inaad heli karto goob ku qoran moodeellada ama joornaalka oo sii socda oo ku siinaya nabadgelyada aad u qalanto.
Waxaa laga yaabaa in hagaha Head Start ee Hormarinta Wax soosaarka Software iyo Maareynta? Hubso inaad ku darto labadaas sawir - waxay kuu sheegayaan sheekada oo dhan!
Waxaan Joojiyay Xisaabteydii Basecamp Maanta
Apr 8, 2007 at 12: 54 AM
Waan heshiin kari waayey wax badan. Kathy's blog wuxuu ka mid ahaa kii ugu horreeyay ee aan iska qoray, waxayna caddeysay inuu yahay jawharad tan iyo markaas. Waxaan xasuustaa akhrinta aan ka yarayn dersin maqaal oo aan u socdaa "wow" isla markaa kadib. Waa mid ka mid ah baloogyada internetka ee aan waligood joojin doonin inay kugula yaabaan qoto dheer iyo fahamka xiriirka ganacsiga iyo macaamilka iyo adeegsiga softiweerka.
Runta haddii loo sheego, runtii aad ayaan uga xumahay qof kasta oo waxaas sameeya oo sababay in tan la soo afjaro. Waxaan u maleynayaa waxa kaliya ee aan hadda sameyn karno waa inaan qodno waxyaabihii hore oo aan baranno, sidaad u jeceshahay wixii aad halkan ku sameysay.